Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. प्रदेसको विकासको लागि २८ अर्व ९ करोडको बजेट – Emountain TV
प्रदेसको विकासको लागि २८ अर्व ९ करोडको बजेट
काठमाडौं, २८ भदौ । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेसको विकासको लागि २८ अर्व ९ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको बिकासलाई जोड दिएको छ ।
पुर्वाधारको विकासमा सरकारले जोड दिएर सर्वसाधारणको समस्यालाई सम्बोधन नगरिएको स्थानीयको गुनासो छ । विकास निर्माणको हिसाबले प्रदेस ५ खासै पछाडि छैन । अगाडि नै देखिन्छ । सरकारले प्रदेसको पुर्वाधार विकासको साथै कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश ५को योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठका अनुसार सम्वृद्ध प्रदेस, खुशी जनताको सपनालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेस अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समयमै पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य भोज प्रसाद श्रेष्ठ, जनतालाई अनुभुति हुने गरि सरकारले कार्य गर्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । प्रदेसको विकासका लागि सवै राजनीतिक दल, संघ संस्था, नागरिक समाज र जनताको सहयोग अवश्यक गर्नु पर्नेमा उहांले जोड दिए । प्रदेश ५ सरकारले समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको सपनाको नारा अघि सारे पनि सर्वसाधारणले भने त्यसको अनुभुति गर्न नपाएको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ । सरकारले पुर्वाधारको विकासलाई जोड दिएर सर्वसाधारणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
प्रदेश ५ सरकारले प्रथम आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र भदौ १४ गते सर्वजनिक गरेको हो । अवधारणा पत्रमा मानवबिकासका सुचाङ्क ५ वर्प भित्र न्यूनिकरण गर्ने गरि गरिबीको दर २९.९ % बाट १० % प्रतिशतमा झार्ने र प्रति व्यक्ति आय दुइ हजार डलर पु¥याउने योजना छ ।
श्रमिकहरुको श्रमको सम्मान गर्न उद्योगीहरुलाई उद्योगमन्त्रीको आग्रह
रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत आयोजनाको शेयर आवेदन खुला
बालुवाटार जग्गा विवाद : ‘पद र हैसियतले छानबिन प्रभावित हुँदैन’